Howlgalkii badbaadinta doonidi ganacsi ee Boosaso oo gabagaba ah (dhegayso) – Radio Daljir
Febraayo 26, 2018 9:16 b 0
Guddoomiyaha guddigii ku hawlanaa bad-baadinta doontii dhawaan ku caariday magaalada Bossaso Sh. Fu’aad Maxamuud X. Nuur ayaa wareysi uu siiyey Radio Daljir wuxuu ku sheegay in hawshaasi ay marayso meel gabo-gabo ah, ayna doontaasi hadda ku xiran tahay dekedda weyn ee magaalada Bossaso.
Sheikha ayaa intaas ku daray in inta badan badeecadii doontaasi siday la dajiyey walise ay socoto dajinta badeecadu. Sheikh Fu’aad ayaa khadka telefoonka ugu warramay Axmed Sh. Maxamed “Tallman” oo ku sugan studiyaha Daljir ee magaalada Bossaso